စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ National Development and Reform Commission(NDRC)၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ | Ministry of Finance & Planning
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ National Development and Reform Commission(NDRC)၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
Posted By : editor, Date : 27.11.20180comment
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ National Development and Reform Commission (NDRC) ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ H.E. Mr. Ning Jizhe ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက် ယနေ့နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းအား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းဆွေးနွေးခဲ့သည် ။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပူးတွဲကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် မြန်မာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးတွဲကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအကြား အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (၂၀၁၇) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်း အနားကျင်းပ
Promoting Accountability and Responsiblity နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပေါလစ်ဗျူရို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် H.E. Mr. Vuong Dinh Hue ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း ယူနန်ပြည်နယ် အမြဲတမ်းဒုတိယပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ